विनयको विकिनी प्रचारले फाइदा पुग्ला कि घाटा ? (भिडियो) « Mazzako Online
विनयको विकिनी प्रचारले फाइदा पुग्ला कि घाटा ? (भिडियो)
तीज पर्व नजिकिदै गर्दा फिल्म ‘रोमियो एन्ड मुना’को तीज विशेष गीत सार्वजनिक भयो । गीतको भिडियोमा फिल्मकी मुख्य हिरोइन श्रृष्टी श्रेष्ठ, अभिनेत्री वसुन्धरा भुषाल, सुष्मा कार्की लगायतले नृत्य गरे । यो गीतले फिल्म नेपालीपन बोकेको कथामा छ भन्ने वुझियो । फिल्मको टिजर केहि दिन अगाडि सार्वजनिक भयो । जसमा चराका जोडीलाई मात्र प्रस्तुत गरियो । निर्देशक नरेश कुमार केसीको मेकिङ स्टाइल राम्रो थियो ।
बिहिबार भने एकाएक अभिनेता विनय श्रेष्ठ रोमान्टिक मुडमै देखिए । फिल्मको ‘स्यान्डविच’ बोलको गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा विनयको कार्यक्रम हल प्रवेशले धेरैलाई छक्कै पारिदियो । कार्यक्रम हलमै उनी विकिनी लगाएका २ यूवतीसँग नाच्दै प्रवेश गरे ।
यो तस्बिरले फिल्मको पहिलो तीज गीत र यो गीतमा ठूलो अन्तर देखाइदियो । फिल्म प्रचार र चर्चाका लागि मेकरहरु विभिन्न उपाय अपनाउँछन् । विनयले पनि गीत अनुसारकै प्रचार गर्न खोजेका होलान् ।
तर, विकिनी गर्लसँग पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित भएर केहि समय विनय नृत्य गरे । धेरैले यसलाई सस्तो प्रचारको रुपमा पनि हेरे । फिल्मको पोष्टर पनि सोहि कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो । पोष्टरमा विनय र अभिनेत्री श्रृष्टी श्रेष्ठ एक अर्काको प्रेममा हराएका छन् । फिल्मको यो प्रचार शैलीले धेरैले फिल्मलाई घाटा लाग्ने टिप्पणी गरे । विनयको यो विकिनी फर्मुलाले बक्स अफिसमा काम गर्ला किन नगर्ला ? फागूण ११ गतेलाई नै कुरौ ।